जुन 4, 2019 जुन 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, वियर, स्वास्थ्य
स्वास्थ्यमा लागि वियरका फाइदाहरु र वेफाइदाहरु । वियर नियमित पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुने खतरा हुँदैन । अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा, नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ । तर यसले धेरै वेफाइदाहरु र कम फाइदाहरु भएको तथ्य फेला परेको छ ।
जब हामीले चाहिने मात्रामा प्रशस्त पानी पिउने गर्छौं भने वियरले भन्दा बढी काम गरेको हुन्छ । वियर मानिसले बढी खान सक्छ तर पानी कम खाने गरेको हुनाले नै वियरले पत्थरी फालेको वा कम बनेको हुन सक्छ । आज थुप्रै यस्ता कुरा हामीले पढ्न पाउछौं जस्तै काक्रोमा ८०% पानी हुन्छ तर काक्रो खानाले पत्थरी जम्छ भन्ने अधिकांशको धारणा छ यो नितान्त गलत छ ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले वियरले धेरै नोक्सान गर्न सक्छ । वियरका वेफाइदा कलेजोमा यसले नराम्रो असर गर्न सक्छ । अत्यधिक वियरले सिरोसिस अफ लिभरको रोग र फ्याटि लिभर बढाएर लिभर ड्यामेज हुने खतरा बढाउन सक्छ । कुनै पनि बस्तुको फाइदा कति र वेफाइदा कति भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
राम्रो वस्तुमा भन्दा नराम्रो वस्तुमा मानीस धेरै झुकेको देखिएको छ । यस्ता गलत कुरामा हामीले समए बरबाद गर्नुभन्दा राम्रो उपचारमा लागौं भन्ने मेरो रायछ । पानी प्रसस्त पिउनुहोस दैनिक आधा घण्टा उफ्रनुहोस् तपाइको पत्थरी आफै झर्ने छ । पत्थरीको उपचार वियर होइन पानी हो यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।
← किन आवश्यक छ भोजनको नियम ?
भोक लागेपछि मात्र खाँदा फाइदाहरु र बेफाइदाहरु →